बहस: बालश्रम कसरी अन्त्य गर्न सकिएला ? – Daunne News
बहस: बालश्रम कसरी अन्त्य गर्न सकिएला ?
By Daunne News	 Last updated Jun 12, 2019
आज विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस नेपालमा अझै बालश्रमिक अन्त्य हुन सकेको छैन । त्यति मात्र होइन कतिपय जोखिममुलक क्षेत्रमा पनि बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा लगाइएको नेपालमै पाइने गरेको छ । आज हामीले बहसमा बालश्रम कसरी अन्त्य गर्न सकिएला भनेर सरोकारवालाहरुसँगको प्रतिक्रिया लिएका छौं । उपलब्ध प्रतिक्रिया क्रमश थप्दै जाने छौं ।
उनीहरूका लागि सेल्टर खोल्न आवश्यक
बालश्रम अन्त्यका लागि पहिलो कुरा उनीहरूका लागि सेल्टर खोल्न आवश्यक छ । गरिवी, विपन्नता नै बालश्रमको मुख्य जड हो । आमा वा बाबु मध्ये एक नहुने, सौतेनी आमा हुने वा अन्य विभिन्न कारणले बालश्रम रहेको हो । यसका लागि स्थानीय तहले नै पहल गर्नु पर्छ । बालबालिकाका नाममा खुलेका विभिन्न संस्थाहरूले जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले उनीहरूका विषयमा कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । घरबाट सुरूवात नगर्ने हो भने अन्त्य हुँदैन । होटल, लगायत निर्माणका काममा बालश्रम अन्त्य गर्नका लागी उनीहरूलाइ सेल्टर खोल्नु नै पहिलो कार्य हो । जसले गर्दा सकेसम्म बालश्रम हुनै नदिने र भएपनि त्यसलाइ उद्दार गरेर सेल्टरमा लगेर पढाइका लागि अभिप्रेरित गर्ने नै हो ।
अभिभावक विनाका बालबालिकाहरुको राज्य अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ
बालश्रमले बालबालिकाहरुलाई मात्र नभई समग्र समाजको विकासमा नै पछाडि पारेको हुन्छ । एउटा बालबालिका बालश्रममा जाँदा उसको समग्र विकास नहुने र पछि त्यो देशको विकासँसग सम्बन्धित कुरा हो । त्यसकारण बालश्रमको अन्त्यको लागि राज्यले बालश्रममा आउन सक्ने बालबालिकाहरुको जोखिमको पहिचान गरी उनीहरुलाई सकेसम्म अभिभावकसँगै राख्ने कार्यहरु सुरु गर्नु आवश्यक छ । उनीहरुको क्षमता अनुसारको कार्यहरुको लागि रोजगारको व्यवस्था गरी बालबालिकाहरुको सुरक्षा गर्नुपर्दछ र कोही अभिभावक विनाका बालबालिकाहरुको पनि राज्य अभिभावकको रुपमा रही उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न सकेमा बालश्रमको अन्त्य हुन सक्दछ । साथै स्थानीय तहमा बालसंरक्षणका संरचनाहरु तयार गरी को बालबालिकाको अवस्था के छ भन्ने बारेमा समेत जानकारीहरु लिने र नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने हो भने यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ।
बालबालिकालाई श्रममा लगाउदा हुने कारबाहीको बारेमा आमजनमानसमा बुझाउन जरुरी छ तब मात्र बालश्रम अन्त्य हुन्छ
बालश्रम अन्त्यको लागि पहिला तपाईं हामी र बालबालिकाको घर परिवारबाट नै बालबालिकाको अधिकार र उसको सम्मान गर्न जान्नुपर्छ । कोही परिवारले बाध्यतामा परेर बालबालिकालाई श्रममा लगेको पाइन्छ त्यस कारण उनिहरुको आबस्यकताको महसुस हुनु जरुरीछ । किन साना बालबालिका यसरी बालश्रमको सिकार भए भनेर बुझ्नु पहिलो काम हुन आउँछ । चेतनाको अभावको कारण बालबालिका श्रममा परिरहेको छ पहिला चेतना जगाउनुपर्छ जस्ले बालबालिकालाई बालश्रममा लगाउछ उसलाइ कडा कानुनको दायरामा ल्याउन सके बालश्रम अन्त्य हुन्छ।
जहिलेसम्म कानुन कडा हुदैन तबसम्म बालश्रमको अन्त्य हुदैन चेतना र कानुन नै बालश्रम अन्त्याको सुत्र हो । बालबालिको मौलिक हक अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म बालश्रम अन्त्य गर्न सकिँदैन त्यसले उसको अधिकार को लागि पहल गर्नु जरुरी छ यी सबै पूरा गर्न सके मात्र बालश्रम अन्त्य हुन्छ ।
मुख्य कुरा त बालबालिकालाई श्रममा लगाउदा हुने कारबाहीको बारेमा आमजनमानसमा बुझाउन जरुरी छ तब मात्र बालश्रम अन्त्य हुन्छ ।
कानुनी पाटोलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्छ
मूलत: यसका लागि राज्यले लिने निति नै महत्वपूर्ण देखिन्छ राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा देशब्यापी रूपमा अर्थराजनितक बहस चलाउन ज़रूरी देखिन्छ जसले बृहत्तर रूपमा रोजगारी सृजना गर्न सकोस साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायात जस्ता क्षेत्रमा सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ र संगसंगै कानुनी पाटोलाई पनि थप सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्छ ।